आकाशवाणी (Aakashwani): December 2013
प्रिय मित्रहरु, लामो समयको ब्रेक पछी पुन: 'आकाशबाणी'मा झुल्किदैछु । नरिसाउनु होला है !
धेरै बर्ष अघी एउटा लेखमा पढेको; अन्टार्कटिकाको यात्रामा जानेले अनिवार्य बोक्नु पर्ने तीनवटा कुरो - 1. न्यानो कपडा 2. लाइटर/सलाई 3. रक्सी । यिं मद्धे एउटा मात्र कुरो छुटेमा उस्को मृत्‍यु निश्चित हुन्छ ।
रसिया पनि लगभग अन्टार्कटिका जत्तिकै चिसो ठाउँ हो । त्यसैले स्टालिनले शक्तीमा छँदा जनताको लागि चोक-चोकमा नि:शुल्क भोड्काको ब्यवस्था गरेका थिए । तर मिखाइल गोर्बाचोभ राष्ट्रप्रमुख भए पछी कम्युनिजम मासेर पुँजीबाद भित्र्याए । अनी पहिलो काम नै सरकारले दिने नि:शुल्क रक्सी बन्द गराए, जनतालाई बिदेशी रक्सी किनेर खान बाध्य गराए । तर कठ्यांग्रिदो जाडोबाट बच्न रक्सी किनेर खानसक्ने पैसा जनतासँग थिएन । जस्ले गर्दा उनिहरुले घरेलु मदिरा बनाउन शुरु गरे । गोर्बाचोभ सरकारले घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्ने अनेकौं प्रयास गर्‍यो तर असफल भयो ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाइले पनि रक्सी बन्द गराउने ठुलै अभियान चाले; तर असफल भए । त्यो पछी पनि कयौं कथित सज्जनहरुले घरपारुवा रक्सी निषेध गर्ने प्रयास गरे; तर सबै असफल नै भए । किन ? बिचार गरौं :
धनीसँग के छैन ?
- बस्नलाई घर छ, न्यानो कपडा छ । समय कटाउन टि.भी छ, इन्टरनेट छ, पत्र-पत्रीका छ, ठुल-ठुला फिलिम हल छ । घुम्न, लग्जरी सामान किन्न सुपरमार्केट-मल छ । साँझमा खाने मासु-सलाद र महँगो व्हिस्की, वाइन र भोड्का छ । पैसा छ, मजा छ ।
गरीबसंग के छ ?
- गरीबसंग गरीबी छ । त्यो बाहेक मनोरन्जनको लागि लोकल रक्सी र श्रीमती/श्रीमानबाट 'फ्री अफ कस्ट'मा पाउने यौनको आनन्द छ । क्षितिजसम्मै हेरे पनि अर्थोक के छ र ऊसँग ? दिनभरीको कडा परिश्रम, दु:ख र थकान । त्यसैले अलिकती पिउँछ, दु:ख भुल्छ, हल्का मनोरन्जन गर्छ; सुत्छ । अब रक्सी पनि भएन भने अरु के हुन्छ त गरीबसंग मनभुलाउने साधन र जिजिबिशाको त्यान्द्रो !
रक्सी खानु र खुवाउनु राम्रो हो होइन, लामै बहसको बिषय हुनसक्ला । तर जबसम्म गरीबी रहन्छ, तबसम्म लोकल रक्सी बन्द गराउन कसैले पनि सक्नेछैन र गराउनु पनि हुन्न । बरु लोकल रक्सी बनाउने सक्नेहरुलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी तालिम दिएर बिदेशबाट रक्सी आयात गर्न बन्द गरिनु पर्छ । जस्ले गर्दा रक्सीको लागि देश बाहिर जाने करोडौं रुपियाँ जोगिन्छ भने चरम गरीबीको रेखा मुनी रहेका परिवारको जिबिकोपार्जनमा पनि केही टेवा दिन सकिन्छ ।
त्यसैले धनी-पुँजीपती रक्सी उद्द्योग चलाउन तथा सस्तो लोकप्रियाताको लागि 'लोकल रक्सी नियन्त्रण'को नौटंकी तुरुन्त बन्द गरियोस् । रक्सी बनाएर जिविका चलाऊने बर्गको लागि बैकल्पिक ब्यवस्था नगरि उनिहरुको हाँडा-भाँडा फुटाउने, समातेर दु:ख दिने, जरिवाना तिराएर उनिहरुको बाल-बच्चाको पेटमा लात हान्ने काम रोकियोस् । गरीबको बाँच्ने आशा नछिनियोस् !
Labels: alcohol, Note, लोकल रक्सी